‘लोहोरुङ चिनारी’ बजारमा
Saturday, 12 Aug, 2017 10:47 AM
काठमाडौं, २८ साउन । संखुवासभा गैरी पाङ्माका एलेन ठूलेले केही वर्षको खोजअनुसन्धानपछि तयार पारेको ‘किरात लोहोरुङ राई चिनारी’ पुस्तक बजारमा आएको छ ।
किरात राई लोहोरुङ समाजका लागि गंगाकुमारी राई प्रकाशक रहेको उक्त कृति शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले विमोचन गरे । संस्कृतिविद् जोशीले यो पुस्तक हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । ‘युनेस्कोको अवधारणा, नेपालको संस्कृति मन्त्रालयको मापदण्ड मात्र होइन, हरेक हिसाबले यो किताब महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘हरेक जातिको चिनारी आवश्यक छ . त्यसका लागि यो किताब मार्गदर्शक हो ।’ उनले अमूर्त संस्कृतिको क्षेत्रमा यो नयाँ उपलब्धि भएको दाबी गर्दै सांस्कृतिक विविधतामा राष्ट्रिय एकता रहेको धारणा व्यक्त गरे । भाषाविद् प्रा. डा. विष्णुसिंह राईले बन्दुक चलाउने व्यक्ति लेखनमा लागेकोमा प्रशंसा गर्दै भाषा, संस्कृति जोगाउन सम्बन्धित जाति÷समुदाय नै लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
लेखक ठूलेले लोहोरुङको चिनारी दिने दस्तावेज अभाव देखेपछि आफ्नो संस्कार, संस्कृति संकलनमा लागेको सुनाए । यो कृति अनुसन्धानभन्दा पनि संकलनजस्तो रहेको उनको भनाइ थियो । उनका यसअघि ‘सम्झनामा किम्बर्ली क्रस’, ‘सम्झनामा कराते यात्रा’लगायत कृति प्रकाशित छन् । सिंगापुर पुलिस फोर्सअन्तर्गत गोर्खा कन्टिन्जेन्टको अवकाशप्राप्त चिफ इन्स्पेक्टर रहेका उनको खास नाम लिलानाथ लोहोरुङ राई हो । सन् २०१० मा सेवाबाट अवकाश पाएपछि लेखनमा पनि लागेका उनी अहिले एलेन ठूले नामबाट परिचित भएका हुन् ।